Inona ny politika varotrao?
Hatramin'ny nanombohan'ny Ashine nanondrana ny mpanjifa eropeana tamin'ny 1995 dia nifantoka tamin'ny fanomezana serivisy OEM / ODM ho an'ny mpanjifantsika erak'izao tontolo izao izahay. Ashine dia reharehany fa izy no ao ambadiky ny mpanjifany, ary manohana ireo marika lehibe eny an-tsena.
Inona avy ireo specialities an'ny orinasanao?
Ashine dia mamokatra ny tsipika feno fitaovana diamondra ho an'ny fikolokoloana sy famolahana gorodona amin'ny zavamaniry manokana. Miaraka amin'ny famokarana drafitra tsara sy ekipa QC tena tsara dia azo antoka ny tsy fitovizan'ny kalitao.
B) Ashine dia manana ekipa R&D ambony indrindra eo amin'ny sehatry ny indostria. Miaraka amin'ny traikefa 200 taona mahery ao amin'ny indostria, ny ekipa dia afaka namaha ny olan'ny mpanjifa amin'ny firenena sy faritra samihafa, ary nanampy azy ireo hampivelatra ny fitaovana diamondra mety amin'ny fotoana fohy handresena amin'ny fifaninanana.
C) Ny ekipa mpivarotra Ashine sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia manome ny serivisy matihanina indrindra ho an'ny mpanjifany. Tongasoa ianao handefa anay mailaka ary hizaha azy anio.
D) Ashine dia mieritreritra fatratra ny fiaraha-miasa maharitra ary mitazona hatrany ny fanolorantenany ho an'ny mpanjifa. Ny soatoavin'ny Ashine dia ny, fahamendrehana ary ny andraikitra.
Inona no ataonao mba hitazomana ny hatsaran'ny kalitao?
A) Mba hitazomana ny tsy fitovizan'ny akora fototra, miasa hatrany amin'ireo mpivarotra maharitra azy i Ashine ary tsy manova ny enta-mavesatra ho an'ny akora ambany vidiny. Mandritra izany fotoana izany, mitazona QC henjana amin'ny fitaovana avy amin'ny fitaovana matihanina ao amin'ny orinasa izahay.
B) Ho an'ireo vokatra matotra dia tsy manova ny fizotry ny famokarana sy ny fatorana i Ashine. Manana ny traikefa izahay hamokarana hatrany ny fitaovana mitovy amin'ny tamin'ny 1995.
C) Ampahany lehibe amin'ny fidiram-bolan'i Ashine no napetraka tamin'ny fanavaozana ny tsipika famokarana mandeha ho azy isan-taona. Miaraka amin'ny milina mandeha ho azy bebe kokoa, afaka mampihena ny loza ateraky ny lesoka ataon'ny olombelona isika ary mitazona ny tsy fitovizany.
D) Farany nefa tena zava-dehibe, manana rafitra QC tsara izahay izay ISO9001 mahafeno fepetra, ary ekipa QC tena tsara hiantoka ny kalitao isaky ny dingana famokarana.
Inona ny ora fanaterana (fotoana fitarihana)?
Ny ora fanaterana (fotoana fitarihana) dia manodidina ny 2 herinandro.
Inona no mampiavaka ny ekipan'ny R&D anao?
A) Ny filohan'ny Ashine, Andriamatoa Richard Deng, dia iray amin'ireo nahazo diplaoma voalohany nahazo mari-pahaizana master in Diamond Major any Sina. Manana traikefa 30 taona mahery izy, nohajaina fatratra ho manam-pahaizana manokana amin'ireo matihanina aminy ao amin'io orinasa io ihany.
B) Ny Lehiben'ny injeniera, Andriamatoa Zeng, izay miandraikitra ny ekipan'ny R&D, dia manana traikefa mihoatra ny 30 taona amin'ny famolavolana fitaovana diamondra ho an'ny rindranasa rehetra.
C) Ankoatry ny injeniera ao amin'ny orinasa, ny ekipan'ny R&D dia misy profesora maromaro sy ekipany mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Sichuan, Oniversite Xiamen ary CMU, izay manampy anay hampivelatra ny teknolojia vaovao ary hitazona ny fanavaozana.
D) Ashine dia manangona vola amin'ny fitaovana fanandramana tsara indrindra sy matihanina amin'ny fampiasana R&D, ary mamorona fitaovana manokana koa hizaha toetra ny fatorana isan'andro.
Efa nivarotra tany Eropa / Amerika / Azia ve ianao? Nahazo mpiara-miasa ve ianao izao?
Eny, Ashine dia mamatsy fitaovana diamondra eran'izao tontolo izao ary fanondranana 95% any ampitan-dranomasina, manana mpiara-miasa akaiky izahay any Eropa / Amerika / Azia, ny tsena lehibe dia Amerika, Scandinavia, Alemana, Japan & Pacific, azafady mifandraisa aminay raha mila vaovao momba ny tsena manokana.
Inona ireo fampirantiana natrehinao?
Ashine dia manatrika fampirantiana manerantany toa ny WOC (World of Concrete), Munich Bauma Fair, Xiamen Stone Fair, Intermat Paris, Marmomacc Fair. Tongasoa eto hijery ireo fampirantiana fampirantiana eto ambany:
Ahoana ny fomba hisafidianana ireo fitaovana mety?
Fanontaniana tsara, manana vahaolana feno isika amin'ny fanomanana ny gorodona, fikosoham-bary, ny famolahana ary ny fikojakojana. Tongasoa etoMifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka na antso hahitana ny tolo-kevitrao manokana.
Ahoana no ahalalako ny kalitaon'ny vokatrao?
Azafady, araho ny pejin-tranonkala Ashine ao amin'ny Medias ara-tsosialy toy ny etsy ambany, misy tranga isan-karazany sy tranga fanandramana fampitahana, raha liana kokoa ianao, azafady mba mifandraisa aminay mba hitsapana santionany sasany.
Raha misy olana ara-kalitao, inona no hataonao?
Ny tsy fivadihana sy ny andraikitra dia ny soatoavina ifotoranay hiara-miasa amin'ireo mpiara-miasa maharitra. Ashine dia tompon'andraikitra 100% amin'ny olan'ny kalitao, amin'ny famakafakana ara-teknika, mba andefaso sary vitsivitsy momba ny vokatra tsy mendrika izahay ary ampahafantaro anay ny zava-nitranga, ohatra, ny gorodona, ny milina ary ny fotoana naharetan'ilay fitaovana, raha ilaina izany, izahay dia ' Hangataka sitraka aminao aho hamerina azy ireo ary handefa solo anao raha vantany vao hitantsika ny antony.
Manome santionany maimaimpoana ve ianao?
Tsia, mihaino ny tamberina sy ny 100% izahay aorian'ny serivisy.
Inona ny ora fanateranao?
3-15 andro mitarika fotoana amin'ny famokarana ara-potoana.
Inona ny MOQ (Minimum Order Quantity)?
20 pcs MoQ an'ny entana / miavaka tsirairay.
Manao ahoana ny fonosin'ny padanao?
Izahay dia manolotra 3 pcs napetraka, 6pcs napetraka, 9pcs napetraka boaty anatiny isan-karazany. Hamboarina manokana raha toa ka mibaiko baiko marobe.
Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
Aloavy mialoha alohan'ny famokarana.
Pads polishing vita amin'ny beton, Kiraro fitotoana beton, Kiraro fanaovana diamondra, Trapezoids Diamond Grinding Shoes, Kodiarana mifangaro vy Diamond mifamatotra, Kiraro fitotoana PCD,